गफ ! .....: त्राही त्राही तराई ।
Posted by दीपक जडित at 5:21 PM
सामान्य हिसाबमा सबैले सोच्ने पानीको प्रकोप बाहेक तराईका अन्य दुख: लाई पनि केलाएर हेर्दा मलाई पनि तपाईको 'त्राहि'बाट तराई भएको कुरा ऐतिहासिक नभए पनि व्यबहारीक रुपमा भने प्रमाणित भएको जस्तो लाग्यो ।
अनी 'नेपाली'लाई भौगिलीक स्थान र जातियतको आधारमा बाँढ्ने दु्ष्प्रयासको रचनात्मक बिरोधको लागी हामि सबैले यो समयमा सहयोगको लागी हातेमालो गर्न सके पक्कै पनि राम्रो हुन्थ्यो ।
कुरा सही गर्नु भो !
कहिले तराई जलिरहेको हुन्छ त कहिले डुबिरहेको हुन्छ । अनि सोचेको जस्तो छैन तराई, कारण दिनहुँ लुटपाट का घटना पनि घटिरहेकै हुन्छन् ।
एउटा कुरा "डर" भन्ने शब्द तराई सँग सम्बन्धीत छ, जस्तो कि हामी कहिले काँही भन्छौ, मन तराई-तराई भो !
जेहोस् बाहिर बसेरै भएपनि सहानुभुति प्रकट गर्नुभएको मा धन्यवाद ! सराकारी लापरवाही कै कारण कोशी ब्यारेज भत्किएको हो भन्न कुरामा दुईमत छैन । सायद पहिले नै सोचिएको भए, यती धैरै ठूलो क्षति हुने थिएन, अनि यती धेरै विस्थापित पनि हुने थिएनन् ।
राष्टियता को सवाल मा कुनै पनि सम्झौता हुनसक्दैन । साँच्चै भन्न हो भने तराई मा मधेसी र पहाडिया बिच सद्भाभाव नै छ, तर पनि बिच-बिच मा मधेसी दलहरु ले जनता भड्काउने काम गरिरहेका छन् ।
अर्को कुरा, केही दिन पहिले मैले ग्रेटर नेपाल भन्ने डकुमेन्ट्रिको प्रोमो हेरेको थिएँ, त्यहाँ सुस्ताबासी सँग लिएको अन्तर्वाता पनि रहेछ, जब त्यो हेरेँ शरीर मा एक तरगं संचार भयो । http://www.meroclub.com.np/video/video/2116/Greater-Nepal भिडियो लिंक यही हो । तर नेपाल बाहिरका देशहरुमा भने भिडियो फ्रिज पनि हुन सक्छ, सेकेन्ड सेकेन्ड मा , नेपाल मा भने भिडियो हेर्ने राम्रो माध्यम बनेको छ, यो साइट !
वास्तवमै राजनीतिक र मिचाइका द्रष्टिकोणले पीडित छ तराई । विकासका बजेट पनि पहाडतिरै मात्र धाउन थाले अचेल । फोरमजस्ता पार्टीको चरित्रलाई उदाङ्गो पारेर तराईवासीलाई सहि रूपमा राष्ट्रभक्त बनाउन सकियो भने मात्र तराईको जनजीवन माथि उठ्न सक्छ । नभए भ्रममा बाँचिरहेका सीधासाधा तराईवासीहरू केहि स्वार्थी भारतीयको ललाईफकाईमा परेर आफ्नो पहिचान नै गुमाउने स्थितिमा छन् । इण्डियासँग आन्द्रा जोडिएको फोरमले सप्तकोशीले ल्याएको विपत्तिको बारेमा इण्डियामाझ आवाज नउठाएको देख्दा साँच्चै नै उनीहरूले आफ्नो असली चरित्र पेश गरेका छन् । सबै मिलेर तराईलाई बचाऔँ !
दिलीपजी , आकारजी र रबुजीलाई प्रतिक्रियाको लागी धन्यवाद । यिनै र यस्तै यावत विषयमा हामीले निरन्तर आवाज उठाउंदै आ आफ्नो ठाउँबाट गर्नसक्ने अभियान नै चलाऔं । पहिले देश अनि हामी ।